विकराल बन्दै बलात्कार — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » देश/राजनीति, मुख्य खबर → विकराल बन्दै बलात्कार
November 8, 2017८८ पटक
केही महिनाअघि मोरङको साबिक याङ्शिलातिर अर्थात हाल केरावारी गाउँपालिकाको पहाडी एरियातिरबाट अचानक इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीमा कसैले फोन ग¥यो र भन्यो ‘यहाँ युवती बलात्कारमा परिन्, तुरुन्त प्रहरी आउनुप¥यो ।’ नभन्दै तत्काल प्रहरी टोली खटियो र हतारै हतारमा घटनास्थल पुग्यो । त्यहाँ पुगेर हेर्दा यकीन भो बलात्कार भएकै रहेछ , त्यो पनि कस्तो भने असामान्य खालको अर्थात सामूहिक बलात्कार । त्यसैले प्रहरी बलात्कारीको खोजीमा लागिहाल्यो । केहीसमयपछि बलात्कारमा संलग्न युवा पक्राउ परे, बलात्कारमा तीनजना सामेल रहेछन् ।
बलात्कारका तथ्य प्रमाण सुरक्षित गर्न प्रहरीले तत्कालै पिडित र अभियुक्त तीनैजनालाइ चेकजाँचको लागि नमूना लिन धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पु¥यायो । युवती र बलात्कार आरोपीहरुको पनि ल्याब परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरुको नमूना लिइयो । युवतीले कपडा फेर्न समेत नभ्याएकोले बलात्कार गर्दाको रक्ताम्य बीर्य पनि परिक्षणका लागि लिइएको थियो । प्रहरीले ती सबै नमूना परिक्षणका लागि काठमाण्डौं पठायो । युवतीले पनि बलात्कारमा परेकै बयान दिइन् । त्यसैले प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न यवाहरु बिरुद्ध बलात्कारको मुद्धा चलायो । जव डाक्टरको परिक्षण रिपोर्ट आयो, जसले पनि बलात्कार भएको प्रमाणित गर्यो ।
एकातिर अदालतबाट म्याद थप गराएर हिरासतमा राखी आरोपीहरुमाथि बेलबारी प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ अदालतमा करणी मुद्धा दायर गर्ने प्रकृया चलिरहेको थियो । ‘इन्स्पेक्टर साब केटाहरु निर्दोष छन् छोडिदिनु प¥यो’ भन्दै आउने हिम्मत कसैले गरेको पनि थिएन त्यो बेलासम्म । तर गाउँतिर अनेक चालबाजी भइरहेका थिए । त्यसैले प्रहरीमा फोन गरेर शुरुमा जानकारी दिने ब्यक्ति र पिडित युवतीले पनि कुरा फेर्न पो थाले । उनीहरुले बलात्कार गरेको होइन, गर्न खोजेको मात्र हो भन्न थाले ।
भएको चाहिं के भने युवतीलाइ पिडक पक्षले युवतीलाइ ५ लाख रुपयाँ दिने प्रलोभन देखाई प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाएको थियो भने आर्थिक प्रलोभनमा मुद्धा फिर्ता गराउन दलाल अर्थात बिचौलिया लागिपरेका थिए । घटना गुपचुपमा मिलाउन र मुद्धा प्रभावित पार्न भनेर बिचौलियाहरु पनि लागिपरेका थिए । प्रहरीले निकै होसियारी अपनाएर जुटाएका बलिया तथ्य प्रमाणले गर्दा तीनैजना युवा पुर्पक्षका लागि जेल गए । पिडित र साक्षी प्रमाण बनेका मान्छेहरुको बयान फेरिएपनि बलियो प्रमाणका कारण अपराधी उम्कन पाएनन् ।
त्यसैगरी गत बर्ष बेलबारीमा लगाइएको एउटा मेलाबाट खोर्सानेस्थित घरतर्फ फर्कने क्रममा लालभित्तिको किस्ती पुलबाट अपहरण गरी बेलेपुरको एउटा काठ मिलमा लगेर एक वालिकालाइ सामूहिक बलात्कार गर्ने बेलबारीका शम्भु थापासहित दुइजना पनि दोषी प्रमाणित भई जेल गएका छन् । केही महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुइजनालाइ केही समयअघि जिल्ला अदालत मोरङले ६ बर्षको कैद सजाय तोकेको छ । त्यस घटनामा पनि पिडित महिलालाइ प्रभाब र दवाबमा पारेर बलात्कार आरोपीका आफन्तले बोली फेर्न नलगाएका होइनन् । महिलाले पछिल्लो समयमा आएर आफूलाइ बलात्कार नै नगरेको भन्नेसम्मको बयान दिएपनि दशी प्रमाणका कारण दोषीहरु सजायबाट उम्कन पाएनन् ।
त्यस्तै २०७४ भाद्रको पहिलो साता मोरङ बिराटचोककी थारु समुदायकी एक महिला पनि अपहरणपछि बलात्कारमा परिन् । बेलबारीस्थित सिनेमा हलमा नाइट शो फिल्म हेरेर आफ्ना पतिसँगै घर फर्कने क्रममा राती ११ बजेतिर मोटरसाइकलको तेल सकिएपछि एक अपरिचित मानिसले पेट्रोल खाजीदिने बाहनामा पतिलाइ खोर्साने चोक पु¥याई त्यहीं छाडेर पूर्वतिर भागेको थियो । सिनेमा हेर्न बसेको बेला भएजति पेट्रोल निकालेर पछ्याएको त्यो मानिसले लालभित्ति आएर पतिले बोलाएको छ भन्दै महिलालाइ झुक्याएर बाइकमा चढाई अपहरण गरेको थियो । महिला चिच्याए पनि हेल्मेटले हानेर मारिदिने धम्की दिदै मोवाइल स्वीच अफ गर्न लगाएर उसले अपहरण गरी केराबारी ९ देवीझोडामा पर्ने खदम खोला बगरमा लगेर बलात्कार गरेको थियो ।
स्थानिय केही युवाले महिला कराएको सुनेपछि पछ्याउँदै गएपनि बलात्कारी भाग्न सफल भयो । पछि महिलाका श्रीमान, आफन्त र प्रहरी आएर खोज्दा पनि नभेटिएपछि फरार भएको त्यो मान्छे झण्डै एक महिनापछि अर्थात भाद्रको अन्तिम हप्ता प्रहरीको फन्दामा परेको छ । पक्राउ पर्ने व्यक्ति सुन्दरहरैंचा ११ बेलेपुर निवासी २१ बर्षिय रन्जित तामाङ हो । तामाङले मे ५ प ६८५९ नम्बरको निलो २२० सिसि को पल्सर बाइकमा बसाएर महिलालाइ अपहरण गरी बलात्कार गरेको थियो । बेलबारी प्रहरीका अनुसार तामाङ दमकबाट लुकिछिपी बिराटचौक आएको बेला बिराटचोकबाटै प्रक्राउ परेको थियो । तामाङलाई बलात्कार बिरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरी पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । निज तामाङ यसअघि पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको बेलबारी प्रहरीले जनाएको छ ।
महिलाहरु तथा वालिकाहरु कसरी बलात्कारमा पर्छन् र बलात्कारमा परेकाहरुलाइ कसरी प्रभाबमा पारिन्छ भन्ने केही उदाहरण मात्र हुन् यी । यस्ता घटना त कति हुन्छन् कति, तर धेरै घटना त सार्वजनिक नै नगरी गुपचुपमा मिलाइन्छन् वा लुकाइन्छन् । बलात्कारका घटनामा गाउँ समाजमै छलफल गरेर मिलाउने र पैसा दिएर पिडितलाइ प्रभावमा पार्ने प्रबृति नै पिडितले न्याय पाउन नसक्नुको प्रमूख कारण रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रमुख इन्स्पेक्टर रामजी कटुवाल बताउँछन् । बलात्कारका कतिपय घटनामा पिडितले घटनाको एक हप्ता र दश बाह्र दिनपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेकाले त्यस्ता ढिलो उजुरी आउने घटनामा प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने र पिडितले न्याय पाउन मुश्किल पर्ने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीमा उजुरी गर्दा पिडितको गोपनियता सार्वजनिक नगरिने भएकोले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा बेइज्जत हुने वा कुनै डर नमान्न आग्रह गर्दै उनले बलात्कारका घटनामा सबैभन्दा पहिले र सकेसम्म छिटो प्रहरीमा उजुरी दिन आग्रह गरेका छन् । बिभिन्न चुनौती र जटिलताका बाबजुद पनि बलात्कारका ती अधिकांश घटनामा अपराधीलाई सजाय दिलाउन सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार खासगरी उत्तरी मोरङमा आत्महत्यापछि सबैभन्दा धेरै बलात्कारका घटना प्रहरीमा आउने गरेका छन् । बेलबारी प्रहरीका अनुसार बिगत तीन बर्षयता इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी को कार्यक्षेत्र अर्थात् हालको सुन्दरहरैंचा तथा बेलबारी नगरपालिका र केराबारी तथा ग्रामथान गाउँपालिका क्षेत्रमा जबरजस्ती करणीका ६५ वटा घटनाहरु भएका छन् । आ.ब. २०७१/०७२ को अबधिमा यस क्षेत्रमा २२ जना महिला तथा वालवालिका करणीमा परेका थिए । त्यस्तै आ.ब. २०७२/०७३ को अबधिमा १७ जना र आ.ब. २०७३/०७४ को अबधिमा २६ वटा जवरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । त्यसैगरी तीन बर्षको उक्त अबधिमा जबरजस्ती करणी उद्योगका क्रमस ९, ६ र १२ गरी २७ वटा घटना भएका छन् । त्यसो त यसै बर्षको साउनदेखि भाद्र महिनाको मध्यसम्म अर्थात डेढ महिनाको अबधिमा ५ वटा जबरजस्ती करणीका अपराध भएका छन् । – अम्बिका भण्डारी (संयन्त्र मासिकबाट )